साथीसंग शाहरुखकी छोरी सुहानाको यस्तो हर्कत, तस्विर भाइरल! – hamrosandesh.com
साथीसंग शाहरुखकी छोरी सुहानाको यस्तो हर्कत, तस्विर भाइरल!
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खान पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा चर्चामा आइरहन्छिन् । उनि सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा निकै एक्टिभ छिन्। हालै उनको एक तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ ।
उनले इन्स्टाग्राममा शेयर गरेको एक तस्विरको कारण उनि चर्चामा आएकी हुन्। उक्त तस्विरमा उनि आफ्नो एक साथीसंग देखिएकी छिन् । जसमा उनले गरेको हर्कतलाई लिएर धेरैले कमेन्ट गरेका छन्। उनि सेतो रंगको टपमा देखिएकी छिन्। सुहाना पछिल्लो समय बो’ल्ड लुक्समा देखिदै आएकी छिन्।
पछिल्लो समय सुहाना अनेक कारण सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आउन थालेकी छन् । सुहाना अध्ययनका लागि अहिले न्युयोर्कमा छिन् । उनि न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत छिन् । खबर अनुसार उनि आफ्नो अध्ययन सकेपछि ठुलो पर्दामा देखिदै छिन्।